कसरी जासूस Whatsapp लागि मोबाइल उपकरण उखेल्ने, Viber, Facebook, Skype, रेखा, BBM मा एन्ड्रोइड
म / Whatsapp जासुसी गर्न, Viber, Facebook, Skype
एन्ड्रोइड फोन को लागि मूल यन्त्र.
तपाईं exactspy पहुँच SuperUser दिनुहोस् पर्छ, when installing exactspy (प्रणाली सेवा) लक्ष्य फोन मा.
कसरी जासूस Whatsapp लागि मोबाइल उपकरण उखेल्ने, Viber, Facebook, Skype, रेखा, BBM On Android with exactspy
द्वितीय / मेरो फोन थाह कसरी जड वा छैन भएको छ?
यो हामी आफ्नो Android मा हाम्रो सफ्टवेयर संग कार्यक्षमता जोडी चाहने आमाबाबुको र रोजगारदाता सुन्न एक साधारण प्रश्न छ. अक्सर, एक एन्ड्रोइड उपकरण मूल पहुँच छ कि कुनै स्पष्ट संकेत छ. कुनै बलिरहेको रोशनी छन्, कहीं कुनै लेबल, केही एक Android मूल पहुँच छ कि छैन वा हामीलाई बताउन.
सही अवस्थामा, एक एन्ड्रोइड फोन बारेमा गाडेको हुन सक्छ 15 मिनेट. तपाईं बच्चा या कर्मचारी एक एन्ड्रोइड फोन दिन भने प्रयोग गर्न, तिनीहरूले केही झिल्के कार्यक्रम सञ्चालन गर्न यन्त्रको उखेल्ने सक्छ. शायद फोन केही समय को लागि पहुंच बाँकी थियो र कसैले आफ्नो थाह बिना यन्त्र निहित यदि तिमी सिर्फ थाहा छैन.
तपाईं एक एन्ड्रोइड फोन अझै जरो गाडेको छ भने बताउन कसरी थाहा नहुन सक्छ. यस लेखमा, हामी आफ्नो एन्ड्रोइड उपकरण मूल पहुँच छ कि होइन भनेर जाँच गर्न तपाईं कसरी भन्न छौँ.
III / त्यसैले, मेरो Android मूल पहुँच गर्छ?
1/ आवेदन जाँच
एन्ड्रोइड पक्ष को प्रक्रिया मा, "SuperUser" वा "SU" भनिन्छ एक आवेदन अक्सर छ (तर सधैं) स्थापना. यो निश्चित "superuser" आज्ञा प्रयोग गर्न अनुमति छन् भने निर्धारित भन्ने कार्यक्रम छ. तपाईं स्थापित एक superuser कार्यक्रम हेर्न भने, त्यसपछि यो सबै भन्दा अधिक संभावना जरो गाडेको छ.
2/ प्रयोग अनुप्रयोग गुगल प्ले मा जड जाँच
तपाईं अझै पनि अनिश्चित हुनुहुन्छ भने, फोन मूल पहुँच छ भने तपाईं प्रमाणित गर्न अनुप्रयोग प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ हुनेछ. जड परीक्षक मूल फोन मूल पहुँच छ कि छैन वा छैन तिमीहरूलाई भन्नेछु कि प्ले पसल वा अनुप्रयोग बजार देखि एक स्वतन्त्र अनुप्रयोग हो.
चतुर्थ / तपाईं मूल यन्त्र Whatsapp जासुसी गर्न चाहनुहुन्छ, Viber, Facebook, Skype
तपाईं Xda मंच मा जड उपकरणमा थप जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ
वा Android stackexchange मंच